किन पिउने ‘ग्रीन टी’ ? – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
किन पिउने ‘ग्रीन टी’ ?
काठमाडौँ, २४ जेठ, २०७६ । ग्रीन टी कतिकाे पिउनु हुन्छ ? यदी ग्रीन टी पिउनु हुन्न भने तपाईंले धेरै कुरा छुटाउनु भयो । किनभने दैनिक रुपमा ग्रीन टी पिउँदा शरीरलाई विभिन्न फाइदा हुने गर्छन् । हामीले दैनिक पिउने चिया भन्दा ग्रीन टी स्वास्थ्यका हिसाबले निकै लाभदायक छ ।
ग्रीन टी दैनिक रूपमा पिउँदा मोटोपन घटाउँछ र तौल नियन्त्रण गर्छ । त्यसैले आफ्नाे ताैललाई लिएर तनावमा हुनुहुन्छ र ताैल घटाउन काेशिस गरिरहनु भएकाे छ भने ग्रीन टी दैनिक रुपमा पिउनु हाेस् । ग्रीन टीमा केटेचिन नामको एन्टिअक्साइड हुन्छ, जसले घाँटी तथा दाँतमा हुने संक्रमणबाट बचाउँछ । साथै अनुहारमा चमक समेत ल्याउँछ ।
ग्रीन टीकाे दैनिक सेवन गर्नाले मधुमेह हुने सम्भावनालाई कम गराउँछ । किनभने यसले इन्सुलिन नियन्त्रण गर्छ र रगतमा चिनीको मात्रा पनि कम गराउँछ । यसले रक्तचापलाई पनि नियन्त्रण गर्छ अनि हृदयघातको सम्भावना कम गराउँछ । एन्टीअक्सिडेन्टले भरिपूर्ण ग्रीन टीकाे सेवनले स्वास्थ्यलाई यति धेरै फाइदा गर्छ भने आजैदेखि ग्रीन टी किन नपिउने ?
प्रकाशित मिति: 2019-06-07 2019-06-08 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged ग्रीन टी चिया
सहकारीको चर्को ब्याजलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ : मन्त्री अर्याल
भीरबाट लडेर अमेरिकी नागरिकको मृत्यू
Tags: ग्रीन टी, चिया